စလုံးမြေ မှ ကိုရီးယားဆိုင် – KZ’s Food Review, Singapore | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » စလုံးမြေ မှ ကိုရီးယားဆိုင် – KZ’s Food Review, Singapore	26
စလုံးမြေ မှ ကိုရီးယားဆိုင် – KZ’s Food Review, Singapore
Posted by ဇီဇီ on Jul 13, 2015 in Food, Drink & Recipes, Local Guides, Photography, Society & Lifestyle, Travel | 26 comments
ဒီ တစ်ပတ် က စ ပြီး KZ လည်း ၂၀၀ ယူ
(ဟုတ်ပေါင်) စလုံး အစားအသောက် ရီဗျူးရေးတော့မယ်။
တစ်လမှ တစ်ဆိုင်ပဲ ရေးမှာပါ။ ခိခိ
ဒီ တစ်ပတ် အလှည့်ကျတာကတော့ အကိုကြီးရား အဲ ကိုရီးရားဆိုင် Food ရီဗျူးဖြစ်ပါတယ်။
စားသောက် ဆိုင် အကြီးစားကြီး မဟုတ်ဘူးး
ဒါပေမဲ့ အဖြူတွေ ကြိုက်တဲ့ Sunset Way လို နေရာမျိုးက ဝက်စတင် ဘာဘီကျု ဆိုင်တွေကြားက
စိတ်ကြိုက် အော်ဟစ်စကားပြောလို့ ရ တဲ့ ဆိုင် တစ်ဆိုင်မို့ ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
ဆိုကျု လေးနဲ့ (မိုးမင်းသား မမြင်ပါစေနဲ့)
ကင်ချီ မျိုးစုံကိုပါ အမြည်းချပေးတယ်။
အဲ။ ကာဒ် နဲ့ ရှင်းလို့ အဆင်မပြေဘူးးး
ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်း အများကြီးနဲ့ သွားစားလို့ကောင်းတယ်။
ဆိုင်ရှင်က ကိုရီးယားမ အစစ်။
Kim’s Family Korean Restaurant Blk 106 Clementi St 12 #01-44 s120106 (Clementi District)
Tel: 6774 4643
Mon to Sun: 1200 – 1500, 1730 – 2200
Closed on 1st & 3rd Mon every month
Signature Dish – Kimchi
တစ်ယောက်ကို S$ ၂၀ မှ S$ ၃၀ လောက်ပဲ ကျပါတယ်။
ကျနော် အမှုပြီး တိုင်း အဲဒီ ဆိုင် သွားသွားစားတာ။
၅ ခေါက် သွားစားပြီး တုန်း က ဓာတ်ပုံတွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာတွေ။
ဝက်သားကင် (၃ ထပ်သား/ အသားချည်း ၂ မျိုးရှိ) အောက်ခံ ကင်စရာကို ကို ကြိုက်ရာတောင်းလို့ရတယ်။
ဆလပ် နဲ့ ကင်ချီ မျိုးစုံ
ကင်ချီ ခေါက်ဆွဲ အရည်သောက်
တော်ပူကီ နဲ့ ကြက်သား အိုးကင်းကပ်
ကြက်သား ဂျုံကပ် ကြော်
Mike says: .ဒီကကိုးရီးယားဆိုင်နှစ်ခါလောက်သွားစားဖူးတယ်…ဈေးကြီးတယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ကြောင့် သများက အသားကင် တို့ ချဉ်စပ်တို့ ပဲစားတာ။
မြစပဲရိုး says: တစ်လ မှ တစ်ပုဒ် တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဇီကလေးရယ်။
တစ်ပါတ်တော့ တစ်ပုဒ် တင်ပါ။
အာ့ စားစရိတ် တွေ ဒီမိုခွေစီ ရရင် ပြန်ပေးမယ်။
. မြန်မာပြည် မှာ ကိုးရီးယားကြက်ကြော် တော့ စားဖူးခဲ့ တယ်။ ချိုချိုကြီး၊ မကြိုက်ဘူး။
ဘားမီးစ်နည်း ဘားမီးစ် ဟန် ရထားပေါ်မှာ ရောင်းတဲ့ ကြက်ကြော် ကို ပိုလွမ်းတယ်။
ပဲခေါက်ဆွဲ တော့ မစားဖူးဘူး။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဂျက် စပဲရိုး မြှောက်ပေးလို့ ရေးရတာပါ အရီး ရယ်။
အရင် က စားတိုင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ထားမိတော့ တော်သေးးးး
ပြန်ရှာပြီး ဆိုင် အင်ဖိုလေး အပြည့် ပြန်ရှာနိုင်ရင် ရပါပြီ။
ပဲ ခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်း က မနိုဗီ တင်ဖူးတယ်လေ။
ပုန်းရည်ကြီး နဲ့ လွယ်ပါ့။
kai says: အဲလိုလေး သတင်းစာထဲကဏ္ဍအနေနဲ့လုပ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားနေခဲ့တာ…။
ခုတော့.. ဇီဇီက လက်တွေ့ဦးသပေါ့…။
ဒီလ မျက်နှာဖုံးသတင်းကို.. အင်္ဂလန်လန်ဒန်စတိတ်ရှိုးလုပ်ထားတယ်..။
တလလတော့.. သီဟပူရက သတင်းကြီးတခုကို အဖုံးသတင်းလုပ်ချင်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ငင်?
အနော့ကို အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်တာပဲ ခိုင်းနော်။
kai says: အဟင်းဟင်း..
အစားအသောက်ချည်းဆို ၀လာမှာစိုးသမို့… ဟိုဒင်း..
သီဟပူရကျွန်းပတ်… မာရသွန်ပြေးပွဲလေးများရှိရင်.. ကိုယ်တိုင်ပြေးသတင်းယူပေးပါလို့.. ပြောမလို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .သီဟပူရကျွန်းပတ်… မာရသွန်ပြေးပွဲလေး..ဆိုလို့
.ဟိုတလောကတောင် ရွာသားဂျက်စပဲရိုးတို့အတွဲ .၀င်ပြေးကြသေးလားလို့..ဖွဘုတ်မှာတွေ့တယ်ထင်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီမှာ ဒဂျီးးး နဲ့ မိုက်မိုက်။
သများကို အဲလို ချောက်မချကြပါနဲ့။
ခါတော်မှီ စာပေဟောပြောပွဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းလိုက်ပေးမယ်။
သများ လုံးဝ မပြေးနိုင်ဘူး။
Ma Ma says: ကိုရီးယားလူမျိုးတွေ ကမ္ဘာကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထဲကနေ နယ်ချဲ့လိုက်တာ နယ်ချဲ့နည်းအသစ်လို့တောင် ပြောချင်တယ်။
ကင်ချီတော့ ကြိုက်သား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: သများလည်း အစက မကြိုက်ပါဘူးး
ပဲ ခေါက်ဆွဲကတော့ မထင်ရအောင် စားကောင်းလို့ ကြိုက်သွားတယ်။
kai says: အမေရိကားလည်း ဟောလိဝုဒ်ကနေ နယ်ချဲ့တာပဲလေ..။
လူသားတဦး.. အမျီုးသမီးတဦးလှတယ်ဆို.. အဖြူမတွေကို စံပြုတွေးကြရတဲ့အထိဖြစ်ကုန်..။
အောင် မိုးသူ says: ဆလန်မန်တီကတော့ မရောက်ဖူးခဲ့ဘူး။ Serengoon ဘူတာက Mall ကဆိုင်က လက်ရာတော့ အတော်ကြိုက်ခဲ့ သုံးခေါက်လောက်သွားစားဖြစ်ခဲ့ ထူးခြားတာက ကင်မ်ချီကို ကြိုက်သလောက် ယူစားလို့ရတယ်။ ကိုရီးယား ပန်ကိတ်ကို အတော်ကြိုက်ခဲ့တယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီမှာလည်း ထပ်တောင်းလို့ ရတယ်။
ထိုင်လို့ ကောင်းတာရယ် ကို ကြိုက်တာ။
Wow says: အသားကင်ပဲ စားချင်ဒယ်.. တော့ပိုကီက ဒီက ကိုယားဆိုင်မှာရောင်းတာတော့ စားမကောင်းဝူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီမှာလည်း မကောင်းပါဘူးးး
တောင်ပေါ်သား says: ကိုးရီးယားမင်းသမီးကြိုက်ပေမယ့် ကိုးရီးယားစာတွေတော့ မစားရဲ ၊
ဇီဇီခင်ဇော် says: စပ်တယ်။
အသားကင်ပဲ ကောင်းတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: ရန်ဂွမ်းမြေမှကိုရီးယားဆိုင်တွေကဈေးကြီးသအေ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီ လာခဲ့ အေ မွသဲ ရေ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: လာဂဲ့မယ် လာဂဲ့မဟ် ဟိဟိ
ဒီမှာတော့ ထိုင်းနဲ့ နီးတော့
အန်တီသူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေက ကိုယ်တိုင်လုပ်ကျွေးကြတာ
သူတို့လက်ရာက ဆိုင်မှာထက်စားရတာ ပိုအဆင်ပြေတယ်။
အစားအသောက် ဝါသနာကြီးကြတယ် ။
ကမ္ဘောဒီးယား ခေါက်ဆင့်နဲ့ စားရတဲ့ အသားကင် တအားစားကေါင်းတယ်။။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျနော်ကတော့
ဘယ်နိုင်ငံ အစားးအသောက်မဆို စားးလို့ ရတာပဲ
zarlay says: I don’t like Korea foods.
YE YINT HLAING says: ကင်ချီခေါက်ဆွဲအရည်သောက်ကို ဂလုသွားပါတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကိုယ်တိုင်ချက်လေး တင်မို့ လာအားပေးအူးနော်၊